Specter software kudzikisira matekiniki haana kukwana | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura boka revatsvagiri vanoshandira Google vakapokana kuti zvichanetsa kudzivirira zvikanganiso zvine chekuita neSpecter mune ramangwana, kunze kwekunge maCPUs anyatso shandirwa.
Sekureva kwavo, software-based based mitigation nzira dzega hadzizokwani. Kuti udzivise kushandiswa kweizvozvo Hardware kudzvinyirira, kudzikisira software mhinduro dzavanotarisa kwakawanda senge dzisina kukwana.
1 Nezve Spectrum
1.1 Vhura rimwe gomba kuvhara rimwe
2 Kukundikana uku kunofanirwa kugadziriswa chero zvodii
Tinofanira kurangarira izvozvo Ndokutenda kuGoogle kuti tinoziva kuti kusagadzikana kwakanyanya kunokanganisa machipisi emazuva ano uye pamwe iyo yese semiconductor indasitiri, ivo vanonyanya kukanganisa 86-bit Intel x64 CPUs.
Asi izvi zvikanganiso zvekuchengetedza iwo zvakare anokanganisa mapurosesa anoenderana neArM architecture (Samsung, Qualcomm, MediaTek, Apple, Huawei, nezvimwewo) kuhongu senge kuvakwa kweCPU kwakagadziridzwa neBMM uye padiki padiki kune iyo AMD processor.
Specter inoenderana neyakasiyana miviri yekutanga: 1 (Boundary Check Bypass) uye 2 (Branch Bypass Injection) Uku kunetsekana kwakakomba kwakawanikwa nekambani yeMountain View uye yakafumurwa kune chaiwo marudzi ehukama hwakanangana.
Specter inonyanya kutyora chipingaidzo pakati pekushandisa uye inobvumira murwisi kuwana pakavanzika ruzivo pamashandisirwo ekushandisa, kunyangwe kana akachengetedzwa.
Vhura rimwe gomba kuvhara rimwe
Vatsvakurudzi veGoogle vakawana , que iyo yazvino processor data cache nguva yekupedzisira inogona kushungurudzwa kutora zvisiri pamutemo ruzivo kubva kukombuta.
Ichi chimiro chinoshandiswa nevazhinji vemazuva ano maprosesa kukwidzirisa mashandiro, asi zvinogona zvakare kukonzera zvakakomba kuchengetedzeka matambudziko.
Vatsvakurudzi veGoogle vakakwanisa kuratidza kuti varwisi vanogona kutora mukana weichi chiitiko (inozivikanwawo sekufungidzira kuuraya) kushandisa mashandisirwo-enzira enzira nekupfuura iyo MMU uye kuverenga zviri mukati memusoro wekernel.
Komputa iyo yaiwanzo kunge yanga isingasvikike kwavari. Dambudziko iri zvinhu, ndokuti, zvinoreva machipisi asingadzokezve Izvo hazvingakwanise kushandisa chigamba kuburikidza nemicrocode kugadzirisa ese akasiyana eakasiyana ekuchengetedza kusagadzikana kwakaratidzwa mumwedzi gumi nemana yekupedzisira, kunyanya kune kushushikana kwaSpecter.
Kugadzirisa dambudziko iri zvinobudirira, zvingave zvakakodzera kushandisa mepu yekuzviparadzanisa nzira kana kugadzira mapurosesa matsva neakagadziridzwa ekuvaka maererano.
Mune gwaro rakagoverwa naArXivVanotsvagurudza parunyoro rweAlfabheti vava kuona kuti mapurosesa ese anotsigira kuuraya kwekufungidzira anoramba achingobatwa nekurwiswa kwakasiyana kwenzvimbo, kunyangwe paine matanho ekuderedza anogona kuwanikwa mune ramangwana.
Kukundikana uku kunofanirwa kugadziriswa chero zvodii
Maererano navo, Kugadzirisa zvechokwadi zvese zviripo uye zvenguva yemberi Specter zvine chekuita netupukanana uye kutyisidzira kwavanounza, CPU vagadziri vanofanirwa kushandira yekupa maumbirwo matsva ema microprocessors avo.
Intel yakati ichave inosanganisira Hardware inogadzirisa mabugs yeakananga uye inozivikanwa Hardware mune ayo ramangwana machipisi.
Dambudziko, sekureva kwevaongorori veGoogle, nderekuti lSpug-zvine hukama nemabhugi anoonekwa seakakwana kirasi uye kuti, pamusoro pezvo, kusagadzikana kune chekuita nekufungidzira kuuraya kunonyanya kufarira kurwisa kwenzira.
Vatsvakurudzi veGoogle vakafunga mhinduro dzinoverengeka, Izvi zvinosanganisira kubviswa kwakazara kweyekufungidzira kuuraya mashandiro, pamwe nekudzikisira kunyatso kunonoka uye pakupedzisira "masking".
Vatsvakurudzi veGoogle Ivo zvakare vakaratidza kuti aya matanho ekuderedza haazi asina matambudziko uye kuti zvirango zvekuita zvinogona kushanda kana zvikaitwa.
Pakupedzisira ivo Vakapedzisa nekutaura kuti Specter anogona kunyanyisa kunaka kuzita rakesezvazvinoratidzika kunge zvakagadzirirwa kutitambudza kwenguva yakareba.
Izvo zvinosimbisa chokwadi chekuti isu takareba takatarisana nekuita uye kuomarara tichiregeredza chengetedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Specter software kudzikisira michina haina kukwana
Zvinogona kutaridzika kunge zvakapusa zvandinofunga, asi haisi chiyero chakanaka chekumisazve 32-bit processor kune kumwe kushandiswa?
Ndatenda nekutaura. Hazvina kupusa iwe une chirevo chakanaka. Dambudziko nekuvakwa uku ndiko kukwana kwarinako uye kumwe kwacho kubata kwe RAM, sezvo uchiziva kuti haigone kuita zvinopfuura 4 GB chete uye nanhasi nezvinodiwa zveruzhinji rwuri "kugonesa" hazvigone .
4 GB isina PAE rutsigiro, iyo yandinofunga inogona kunyatsoshandiswa ..
Dambudziko nderekuti 32-bit chikuva chakakanganiswa. Haisi dambudziko repuratifomu, idambudziko rekutumirwa kunatsiridza mashandiro.
Sezvo zvinogona kuverengerwa muchinyorwa:
Iyo yazvino processor data cache nguva yekupedzisira inogona kushungurudzwa kutora zvisiri pamutemo ruzivo kubva kukombuta.
Kutenda nekujekeswa. Ini ndakanzwisisa kuti haina kukanganisa iyo x32
OpenEXPO inotiunzira webinar uye mikana yekuratidzira